Cusboonaysiinta software – Bogga 10 – Windows – Vessoft
Mid ka mid ah analogues hoggaamineed oo lacag la’aan ah Office Microsoft ah. Software wuxuu taageeraa qaabab ugu caansan si ay u gaaraan waafaqsan ugu badnaan la software kale xafiiska.
Tani waa qalab weyn oo taageera teknooloojiyada daruuriga ah ee heerarka dheeraadka ah ee ilaalinta kombiyuutarka marka lagu daro xal buuxa oo antivirus ah.
Barnaamijkan waxaa loogu talagalay in lagu nadiifiyo RAM-ka kombiyuutarka isla markaana fiiri macluumaadka ku saabsan xaaladda RAM ee waqtiga dhabta ah.
Barnaamijkani wuxuu leeyahay dhowr qalab oo lagu shaqeynayo qaababka muuqaalka JPEG iyada oo aan khatarta ka iman karta tayada asalka ah.
Barnaamijka waxaa loogu talagalay in uu abaabulo habka shaqada iyo abuurida hal shaqo oo lagu hormarinayo isdhexgalka shaqaalaha.
Ciyaaryahanka multimedia ayaa la tiro balaadhan oo ah qalab waxtar leh. Software wuxuu taageeraa loo maqli karo ee ugu musuq-files warbaahinta, goobaha la fidiyey ee subtitles iyo qaabeynta ah faylasha video.
Qalabka ayaa in lagu soo qabto video ka shaashadda kombuyuutarka aad. Software ayaa awood u baahinta falalka ka shaashadda adeegyada video caan ah.
VPN iyo Wakiil
Utility Simple si aad u nadiifiso nidaamka ka faylasha loo baahnayn iyo hagaajin khaladaad diiwaanka. Software wuxuu kuu ogol yahay in aad u aragto oo dhan dhibaatooyin laga helo suuqa kala aragti faahfaahsan.